Search Results for “တပ်မတော်” – DVB
Search Results For: တပ်မတော်
မန္တလေးတိုင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ တဲစုကျေးရွာမှာ တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့သူ အမျိုးသား တယောက် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်ညနေက သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ တဲစုရွာသား ကိုမင်းနိုင်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ အမည်မသိလူတစ်စုက သေနတ်နဲ့ လာပစ်သွားတာကြောင့် ဒဏ်ရာရသွားပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"ကိုမင်းနိုင် သေနတ်နဲ့ ၃ချက်အပစ်ခံရတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်လာပြီး သူ့ အိမ်ရှေ့ မှာ ပစ်သွားတာလို့ သိရတယ်။ မိတ္ထီလာဘက်မှာ ဆေးကုနေရင်း သေသွားတာပါ။"
ကိုမင်းနိုင်ဟာ အရင်က တပ်ထောက်ခံပွဲတွေကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ သူ့ကို ဒလန်ဆိုပြီး ရေးတင်ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းနေမှုကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် တပ်မတော်အနေနဲ့ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုက ရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေး ကတိကဝတ်ပြုမှုကို တရားဝင်ကြေညာဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်နေမှုမှ နုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာဖို့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ)က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေစသဘောတူစာချုပ် (အန်စီအေ) ၆ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ချက်မှာ တောင်းဆိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကေအန်ယူအနေနဲ့ အန်စီအေ အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက် အကောင်အထည်ဖော်ဘက်တွေနဲ့အတူ စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကို ကြံ့ကြံ့ခံကျော်လွှားက ၂၀၂၀ အလွန်ကာမှာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောင်ရေးအတွက် အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ၃ ရပ်ပါဝင်တဲ့ တဆင့်စီ တိုးတက်မှုရယူနိုင်မယ့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကို သဘောတူညီချက် ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ကစ စစ်အာဏာသိမ်းယူမှုက အန်စီအေ အခြေခံမူအားလုံးအပေါ် ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေကာ အန်စီအေ အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေ အားလုံးကိုလည်း ရပ်သွားစေပြီး တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို အင်အားသုံး အဖြေရှာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီလို့လည်း ကေအန်ယူက ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နိုင်ငံတဝန်း တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံး ဖိနှိပ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ လူမှုစီပွားဒုက္ခပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ခံစားနေရပြီး နိုင်ငံပြိုလဲပျက်စီးလု အနေအထားကို ရောက်ရှိနေပြီလို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။
ကေအန်ယူအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးမူပေါ် ရပ်တည်နေပေမယ့် ပြဿနာပြေလည်ရေး ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးဖက်ရဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့ သဘောတူညီချက်အပါ် လိုက်နာဖို့ထားရှိတဲ့ အဓိဋ္ဌာန် ခိုင်မာမှုအပေါ် လုံးဝမူတည်နေ တာကို အန်စီအေ အကောင်အထည်ဖော်မှု အတွေ့အကြုံကနေ သိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဆိုးဝါးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ကယ်တင်ဖို့ စစ်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့၊ နိုင်ငံတဝန်း ဖြန့်ကြက်ထားတဲ့ ရဲနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့တွေကို သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခြေစိုက်စခန်းတွေဆေီ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာထောက်ကူမှုပြုတဲ့ အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်း လွတ်လပ်စွာ စတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုဖို့၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရေးနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအပါအဝင် တခြား ဆေးဝါကုသမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုအားလုံး ရုတ်သိမ်းဖို့၊ အရပ်သားများအား ကာကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ လိုက်နာရေး အမိန်ထုတ်ပြန်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။
စစ်အာဏာပြုအုပ်ချုပ်အဆုံးသတ်ရေး အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ မဏ္ဍိုင်ပြု နိုင်ငံတကာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို သဘောတူလက်ခံခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံမှ အဓိကကျတဲ့ ကိုယ်စားပြုသူတွေပါဝင်တဲ့ ညီညွတ်ရေးအစိုးရတရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး အာဏာလွှဲပြောင်းကာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး သဘောတူဖို့ သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို တိုက်တွန်းကြောင်း ကေအန်ယူက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တောင်ပိုင်းတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် အမှတ်စဉ် ၁၆ စစ်သင်တန်းဆင်း (ဓာတ်ပုံ)
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ တောင်ပိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် အမှတ်စဉ် ၁၆ အခြေခံစစ်သင်တန်းဆင်းပွဲကို တောင်းပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် စစ်သင်တန်းပို့ချပေးနေတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်သားများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် စစ်ခေါင်းဆောင်ပြော
ဒါ့အပြင် ဒေသတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေးအတွက်လည်း ပိုလျှံတဲ့ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ဥနှင့် နို့တွေကို ဒေသခံတွေကို ရောင်းချပေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာ မနေ့က ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း(မှော်ဘီ) ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈) စစ်လက်ရုံးရွေးချယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး သင်တန်းသား ဗိုလ်လောင်းတွေနဲ့အတူ နေ့လယ်စာစားခဲ့တယ်လို့လည်း စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးက သတင်းထုတ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ရင်ခွင်(ဝက်လက်)သို့ တပ်မတော်သား ၃ ဦး ဝင်ရောက်ခိုလှုံ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဝက်လက်မြို့နယ်မှာ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့က တပ်မတော်သား ၃ ဦး ပြည်သူ့ရင်ခွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့တယ်လို့ ပြည်သူ့ရင်ခွင်(ဝက်လက်)က ထုတ်ပြန် ကြေညာထားပါတယ်။
အဆိုပါတပ်မတော်သား ၃ ဦးဟာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေစစ်ဆင်ရေး ထွက်ခွာလာချိန် လမ်းခုလတ်ကနေ ပြည်သူ့ရင်ခွင်(ဝက်လက်)ကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက် ၂၄ နာရီအတွင်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကို လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအကူအညီတွေ ပေးအပ်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြည်သူ့ရင်ခွင်(ဝက်လက်)က ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူ့ရင်ခွင်(ဝက်လက်) Facebook Page ကနေ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်သူ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံကြဖို့ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံး တပ်မတော်သား ၃ ဦး စတင်ခိုလှုံခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
တပ်မတော်သား တူသား ညီငယ်များသို့
ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက ကိုမင်းအောင်လှိုင်ထံ ငါ့ရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်ထဲက ညီအစ်ကိုများက ငါ့ကို ဘဝင်မကျ မေးကြ၊ ပြောခဲ့ကြတယ်။ ငါ ရေးတဲ့ အချက်တွေကို လက်ခံကြပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ မရေးသင့်ကြောင်း အဓိကထား သတိပေးကြတယ်။ စောင့်ကြည့်ပါဦးလို့လည်း ဝိုင်းပြောတာနဲ့ ငါ ဆက်မရေးဘဲ ငါတို့တိုင်းပြည် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေ မလုပ်သင့်တာတွေ ပြင်ပြီး အခြေအနေတွေက ပြောင်းလဲလာလေမလားဆိုပြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ငါတို့နိုင်ငံဟာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ အတော်လေးကို ဆုတ်ယုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ငါနဲ့အတူ အေးအတူပူအမျှ တပ်တာဝန်၊ နိုင်ငံ့တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းညီနောင်များနဲ့ တာဝန်ယူထားဆဲ တပ်မတော်သား တူသား ညီငယ်များအတွက် ဒီစာကို ဆက်ရေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ငါရေးတာတွေဟာ ငါတို့ တပ်မတော်သားတွေ၊ ပြည်သူတွေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ နားလည်သင့်ထိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ရှိရမယ့် ဆင်ခြင်တုံတရားတွေနဲ့ မိမိဘာသာ ချင့်ချိန်စဥ်းစားကြဖို့အတွက် အပြုသဘောပဲ ဖြစ်တယ်။ မျက်မှောက်ကာလမှာ နိုင်ငံရေး လှည့်စားကွက်တွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနည်းပရိယာယ်တွေဟာ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်ရုံလောက်တင် မဟုတ်တော့ဘဲ လူထုရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ နည်းစနစ်ကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုပါ ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းအားဖြင့် အမှန်တရားတွေလုံးဝ ပျက်သုဉ်းသွားအောင် လုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင် တယောက် အာဏာတည်မြဲရေး တချက်တည်းနဲ့ မိမိလည်း ဒီရာထူးကို တနေ့ရလိုရနိုး၊ မိမိရဲ့ မိသားစုအသိုက်အဝန်း ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ စီးပွားဥစ္စာ ကြီးပွားချမ်းသာဖို့၊ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ သူ့ကျေးဇူးသစ္စာခံ စတဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးစုံနဲ့ ကိုယ့်အကျိုးတရပ်ရပ်အတွက် နောက်လိုက်တွေကလည်း လမ်းအမှားနောက် လိုက်ရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ အမှန်တရားကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မယုံကြည်တော့ဘဲ ဘာလုပ်လုပ် တရားတာ မတရားတာ၊ နည်းလမ်းမကျတာ လစ်လျှုရှုပြီး လုပ်သင့်လို့လုပ်နေကြတယ်ကွာဆိုတဲ့ အသိလောက်နဲ့ အမှားတွေကို ဆက်ကာ ဆက်ကာ ကျူးလွန်မိအောင် အခြေအနေတစ်ရပ် အနေအထားတခုကို ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်တယ်။ အမှန်တရားကို ငြင်းဆန်ရုံ၊ လှည့်ဖြားရုံ၊ ဥပက္ခာပြုရုံနဲ့ အမှန်တရား၊ အချက်အလက်တွေက မကွယ်ပျောက်သွားပါဘူး။ ဒါကို ငါတို့အားလုံးမြင်ဖို့လိုတယ်။
၂။ အမှားနဲ့ အမှန်ကို ခွဲခြားရာမှာ ဒီဆင်ခြင်တုံတရား အသိဉာဏ်ကို သုံးပါ။ ပြည်သူတွေက မှိုင်းမိတယ်၊ နားယောင်တယ်ဆိုပြီး ငါတို့ကိုယ်တိုင် နားမယောင်ဖို့ လိုတယ်။ အာဏာရှင်ယန္တရားစနစ်က သူ ရပ်တည်ဖို့ အရေးပါတဲ့ သြဇာညောင်းတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စိုးရိမ်မှု၊ ပျော့ကွက်တွေကို လိုအပ်သလို အသုံးချပြီး စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနဲ့ နှစ်ကာလချီအောင် သိမ်းသွင်းခဲ့တာပဲ။ အန်အယ်လ်ဒီအောက်မှာ တပ်ကို မုန်းအောင် လုပ်တယ်ဆိုတာ အပြည့်အဝတော့ ငါ လက်မခံဘူး။ တပ်ကို မုန်းအောင် သမိုင်းတလျှောက် လုပ်ခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံတွေက အာဏာရှင်တွေပဲ။ ငါတို့သမိုင်းမှာ အာဏာရှင်တွေက တပ်က တက်သွားကြတာဆိုတော့ လူထုကတက်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆို ငါတို့တတွေ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘာတွေ အနစ်နာခံခဲ့သလဲ မေးမနေနဲ့။ ထောက်ခံမှုက မရှိသလောက်ပဲ။ တဘက်က နိုင်ငံရေးသမားတွေက လူထု နားယောင်အောင် မှိုင်းတိုက်တာတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး လက်တွေ့မှာ အာဏာရှင်တည်မြဲဖို့ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံ၊ ခြောက်လှန့်နည်းမျိုးစုံ၊ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး မျိုးစုံနဲ့ ကိုယ် မယုံကြည်တဲ့ အလုပ်တွေ ငါတို့လည်း လုပ်ခဲ့ရတာပဲ။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးမရလောက်အောင် ရိုက်သွင်းခဲ့တာက အာဏာရှင်ကို ပံ့ပိုးတဲ့ ငါတို့ရဲ့ အတိတ်ခေတ်ဟောင်းက နားယောင်မှု တလွဲအတွေးအခေါ်တွေပဲ။ ‘ကချင် ဖြောင့်တာ တံစဥ်ကောက်သလောက်’၊ ‘ရခိုင်နဲ့ မြွေပွေးတွေ့ရင် ရခိုင်ကို အရင်သတ်’ အစရှိတဲ့ အင်မတန် နိမ့်ကျတဲ့ ရှေးအဆိုတွေနဲ့ ငါတို့အားလုံးကို အမြင်စောင်းအောင် လုပ်ထားပြီး အာဏာရှင်တွေ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အုတ်မြစ်တွေ ချခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့ခေတ်တုန်းကလည်း လိုတမျိုး မလိုတမျိုး ‘ငမြ’၊ ခေါ်လိုက် ‘ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ’ ခေါ်လိုက်နဲ့ ငါတို့က အောက်မှာ ညီအစ်ကိုတွေ၊ ရဲဘော်တွေရဲ့ အသက်တွေကိုရင်းပြီး အချင်းချင်းချခဲ့ရတယ်။ တပ်ကို မုန်းအောင်လုပ်တယ်လို့ ပြောသလို တဘက်မှာ အာဏာရှင်ယန္တရားက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ရွံအောင်၊ ကြောက်အောင်၊ မုန်းအောင် ဝါဒဖြန့်လမ်းစဥ်တွေ နည်းမျိုးစုံ ဖြန့်ခဲ့ကြတယ်။ ဘာသာသာသနာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ငါတို့နိုင်ငံကမှ တမူထူးခြားနေသယောင် အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေမှ မကယ်ရင် ချောက်ကမ်းပါးထဲ ကျတော့မယ့် အခြေအနေတွေကို လုပ်ကြံပြီး စိုရိမ်စိတ်တွေ ရိုက်သွင်းခဲ့တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ရွံအောင်၊ ကြောက်အောင်၊ မုန်းအောင် လုပ်ခဲ့ပြီးမှ အခုကျ ဖက်ဒရယ်ကို သွားရအောင်ဆို ဖြစ်လာပြီ။ အဘွားကြီးကို မုန်းအောင် အရင်ခေတ်ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကို အသုံးချပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဝါဒဖြန့်ခဲ့တာတွေ မင်းတို့အားလုံး အသိ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းတောင် ရှင်းတဲ့အချိန်မှာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေကို တပ်တွင်း သတင်းတွေနဲ့၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ငါတို့ရော ပြည်သူရော အားလုံးသိအောင် အတိအကျ ချပြတတ်တဲ့ စနစ်ကြီးထဲမှာ အဘွားကြီးရဲ့ မဟုတ်မဟတ် ဇာတ်လမ်းတွေကို ဘာအတွက်ကြောင့် ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ချမပြရဲရမှာလဲ။ အဘွားကြီးရဲ့ ပြစ်ချက်တွေနဲ့ အန္တရာယ်တွေက အဲသလောက်ကြီးတောင်ဆိုရင် ၂၀၁၂ ကတည်းက ဒီအကြောင်းတွေကို အကုန်ဖော်၊ အများသိအောင် ရှင်းပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တောင် ဖြစ်လာခဲ့စရာ မရှိပါဘူး။ အမှန်က ငါတို့ကို နှစ်ရှည်လများ ရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ အဘွားကြီးဇာတ်လမ်းအများစုဟာ ငါတို့အားလုံး အဘွားကြီးကို မုန်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်နေလို့ပဲ။ တချို့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ အောက်ကကောင်တွေက ထုံးစံအတိုင်း အပေါ်က ‘မင်းတို့ ရအောင် ဖော်ကြ’ လို့ ခိုင်းထားတာနဲ့ လူကြီးအကြိုက် မရ ရအောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ရင်းနဲ့ ဖိုတိုရှော့လုပ်၊ သက်သေခံတွေ လိမ်တင်၊ ဇယားတွေဆင်ပြနဲ့ အမှန်လိုလို ယောင်ဝါးဝါးတင်ပြရင်း ငါတို့အားလုံးရဲ့ အမိန့်နာခံတတ်တဲ့စနစ်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၊ ငါတို့ကို လူပြိန်းသာသာလောက် သတ်မှတ်ထားပြီး ဝါဒဖြန့်ခဲ့တာတွေလည်း ပါတယ်။ အချုပ်ပြောရရင် နှစ်ရှည်လများ အဘွားကြီးက အကျယ်ချုပ်အောက် ဘယ်သူနဲ့မှတောင် ဆက်သွယ်မရအောင် ပါးစပ်အပိတ်ခံထားရချိန်မှာ ‘တိုင်းပြည်ဖျက်မယ့် ကုလားမယား’၊ အန်အယ်လ်ဒီကလှုပ်လို့တောင် မရဘဲ မြောင်းထဲ ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ‘ကွန်မြူနစ်တွေ’၊ ‘အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ပေါင်းရိုက်ပြီး အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာပျောက်အောင် လုပ်မယ့်ကောင်တွေ’ စသည်ဖြင့် နှစ်ပြားမတန်အောင် အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်ထားခဲ့ပြီး ငါတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး အာဏာရှင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို အမြဲတမ်းလိုလို ဖန်တီးနေခဲ့တာဘဲ။
၃။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ငါတို့နိုင်ငံ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းခံက ဘာမှ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ တပ်နဲ့ အာဏာသိမ်းလိုက်တာပဲ။ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်ကို ဥပေက္ခာပြု၊ မထီမဲ့မြင်လုပ်၊ လက်နက်အားကိုး ခြိမ်းခြောက်ပြီး မိမိအနာဂတ်၊ မိမိနဲ့ မိသားစုကိုယ်ကျိုးအတွက် အာဏာသိမ်းခဲ့တာပဲ။ ဒီအမှားတွေ မတိုင်ခင်မှာလည်း ကိုမင်းအောင်လှိုင်က နားရမယ့် လုပ်သက်စေ့ချိန်မှာ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်တွေကို ချိုးဖောက်ပြီး အနားမယူခဲ့၊ တပ်ချုပ်တာဝန် လွှဲပြောင်းမပေးခဲ့တာကို ငါတို့အားလုံး လုံးဝ လုံးဝ လက်မခံသင့်ပါ။ ဒီစည်းမျဥ်းတွေက ကိုယ်ကြိုက်သလို ကိုယ့်အဖွဲ့လေးနဲ့ အကျဥ်းရုံးလက်ဝါးရိုက်ပြီး ပြင်ချင်တိုင်း ပြင်နေရင် ငါတို့ တပ်မတော်လည်း အာဏာရှင် မွေးထုတ်တဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ တပ်မတော်အဆင့်ပဲ ရှိနေလိမ့်မယ်။ လုပ်သက်ပြည့်ရင် ခြွင်းချက်မရှိ၊ အကြောင်းပြချက်မရှိ အနားယူကြပါ။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် အခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းက လုပ်ကြပါ။ အသက် ၆၀ ကျော်ရင် တပ်ထဲမှာ ကာယ ဉာဏ ဖျတ်လတ်မှု ပြည့်ဝတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ယူဖို့ မသင့်လျော်တော့ပါ။ မျက်မှောက်ကာလမှာ သွက်သွက်လက်လက် ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး ခေတ်ကာလနဲ့ဆီလျော်တဲ့ မဟာဗျူဟာတွေ၊ တပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချပေးဖို့ဆိုတာ အသက် ၆၀ ကျော်ရင် သဘာဝမကျတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အပတ်စဥ်က ညီအစ်ကိုတွေ၊ ကိုယ့်အောက်က ညီငယ်တွေက စည်းကမ်းတကျ အနားယူသွားချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို သက်တမ်းတိုးနေတာဟာ ဘယ်လိုပဲ လှည့်ကစားပြပြ၊ စစ်သားလို တည့်တည့်ပြောရရင် အရင်ခေတ်တွေကလို အာဏာရှင်လမ်းကြောင်း သွားနေတာပဲ။
၄) ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောင့်ကြည့်ပါဦးလို့ နောင်တော်တချို့က အကြံပြုပါတယ်။ နစက အနေနဲ့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်တင်ပေးမှာပါလို့ ပြောကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ ၈ လလောက် ကြာပြီးတာတောင် ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုကို မယ်မယ်ရရ ထောက်ပြနိုင်တာ ငါမတွေ့ပါ။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကို မရ ရအောင် ဖန်တီးယူနေတဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်လောက်အောင် ရှိခဲ့ရင် ရှင်းပြကြပါ။ မဲမသမာမှု တွေ့ရင် ကန့်ကွက်လွှာတင်ဖို့ အခွင့်ပေးထားခဲ့တာပဲ။ မဲထပ်ခါပေးခဲ့တဲ့ မဲရုံများသတင်း မတွေ့မိပါ။ ရှုံးတဲ့ပါတီတွေက လိမ်ချင်တာကို တပ်က ဝင်လက်လျှိုစရာ မလိုပါဘူး။ မသမာမှုတွေ၊ အကြောင်းပြချက်တွေက ဒီလောက်ခိုင်လုံနေရင် ပြည်သူတွေလည်း မ အ ပါဘူး။ လက်ခံလာကြမှာပါ။ ခေတ်ဟောင်းအတိတ်က နိုင်ငံရေးကွက်တွေနဲ့ သွားလှည့်စားလို့ အခုလို ဖြစ်ကုန်တာပဲ။ ၂၀၁၅ မှာ မဲစာရင်းနဲ့ အမှန်တကယ် မဲပေးတဲ့ စာရင်းများ ကွာဟမယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေးကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့ လေးစားရတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် တယောက်ပါ။ ဒီတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲစာရင်းတွေက ပိုပြီးတိကျလာမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ပေးခဲ့တဲ့မဲတွေ မသမာမှု ရှိခဲ့ရင်လည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်တရပ်ဖြစ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ သွားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မသမာမှုတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် သက်သေပြနိုင်ရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့အမတ်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ငါတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ တပ်ကို အသုံးချပြီး အာဏာသိမ်းတာ အာဏာရူးအလုပ်ပါ။
၅။ ငါတို့ ပါတီနိုင်ငံရေး လုံးဝ လုပ်မရပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရော ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ တပ်နဲ့ တွဲထားဖို့လုပ်တာ၊ တပ်ကိုယ်စားပြုပါတီအဖြစ် ကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေသည် တပ်မတော်ရဲ့ ကြားနေရမယ့် အနေအထားကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ မပြောနဲ့။ ပြည်ပ ရုရှား၊ တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဂျပန်က မစ္စတာဝါတာနာဘေးလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင် စာရင်းဇယားမျိုးစုံနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဘယ်လိုနိုင်မယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေက ဒီလိုရှိတယ် စသည်ဖြင့် ကိုမင်းအောင်လှိုင်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ တခြားအချက်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုအပြုအမူတွေဟာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ကြားမနေဘဲ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကို နိုင်ငံတကာကတောင် သိနေလောက်အောင် ပါတီနိုင်ငံရေးထဲမှာ နစ်ဝင်နေခဲ့တာကို သက်သေပြနေတယ်။ ငါတို့ တပ်မတော်သားတွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လုံးဝတွဲလို့မရပါ။
၆။ လက်ရှိ မျက်မှောက်ကာလမှာ ကမ္ဘာတဝန်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူမှုစီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ဘဏ်စနစ်၊ တရားစီရင်ရေးနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဘက်စုံ ကဏ္ဍစုံက ကျွမ်းကျင်သူ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာရှင်တွေ လူငယ်တွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီလိုဘက်စုံကျွမ်းကျင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကို ငါတို့ တပ်မတော်တခုတည်းက မထွက်နိုင်ရုံမက မထွက်သလောက်ပါပဲ။ လက်ရှိစနစ်အောက်မှာ တော်သူ၊ တတ်သူတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်သူတွေ ထိပ်ဆုံးရောက်ဖို့ ခဲယဥ်းပါတယ်။ ဒါကို ပြင်ရပါမယ်။
၇။ လုံခြုံရေးအကျပ်အတည်းတွေ ဖြစ်လာတာက လက်နက်ကို သုံးပြီး အာဏာရယူ၊ ညှိနှိုင်းရမယ့်အစား ဂျင်ဇီကိုတောင် ရှုံးနေပြီလား၊ မင်းတို့ပါ ဂွမ်းသွားမယ် ဆိုပြီး မြှောက်ပေးကြတာနဲ့ တပ်နဲ့ အကြမ်းကိုင်လိုက်တော့ လူငယ်တွေက ဘယ်လိုပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် မဲပေးခဲ့၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှင်းရှင်း၊ ဆန္ဒပြပြ ဘာမှမထူးတော့ဘူးလို့ သုံးသပ်ပြီး လက်နက်နဲ့ အကြမ်းနည်းနဲ့ပဲ ပြန်ဆန့်ကျင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားခဲ့ပြန်ပြီ။ ငါတို့ တပ်မတော်သားတွေဟာ ပြည်သူတွေအပေါ် မတရားမလုပ်ပါ။ အားလုံး စစ်သည်ကျင့်ဝတ်နဲ့ သစ္စာဆိုထားကြပါတယ်။ တပ်ကို ဆန္ဒပြပွဲတွေ ထိန်းချုပ်ခိုင်းတာမှာ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ရှေ့မှာထားတယ်ဆိုပေမဲ့ လက်တွေ့မှာက ထိထိရောက်ရောက် မထိန်းနိုင်ပါဘူး။ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ထိန်းနိုင်အောင် ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်သူ လူငယ်လေးတွေကို ခေါင်းကိုထိအောင် ပစ်သတ်၊ စီစီတီဗွီတွေ ရိုက်ချိုး၊ မြို့လယ်ကောင် လမ်းဘေး ရပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေကို ယန္တရားတွေနဲ့ ထိုးချ၊ သဲအိတ်တွေကို လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ပြ၊ ညဘက်တွေမှာ ပြည်သူအများ နားလည်အောင်၊ မလန့်အောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ကိုင်တွယ်ရမယ့်အစား တိုက်ခန်းတွေထဲ လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ရမ်းပစ်၊ ထောက်လှမ်းရေးခေတ်ကထက် ဆိုးအောင် စစ်ကြောရေးရောက်ရင် အလောင်းနဲ့ ပြန်ထွက်၊ ဒီလို လူမိုက်ဆန်ဆန် မင်းမဲ့ ဥပဒေမဲ့စရိုက်တွေဟာ ပြည်သူက ငါတို့တပ်မတော်ကို မုန်းသထက် မုန်းအောင် လုပ်တာတွေပဲ။ အခုခေတ်မှာ လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်နိုင်တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေက ထွက်နေတာပဲ။ ငါ့ကို ပြတဲ့ တချို့အထောက်အထားတွေက ထုံးစံအတိုင်း တပ်ထဲကပါ။ ပြည်သူကို လူမိုက်ဆန်ဆန်၊ သောင်းကျန်းသူလို သတ္တိရှိ ထွက်ချကြ ဆိုပြီး မခြိမ်းခြောက်ပါနဲ့။ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရပ်ပါ၊ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကျပ်အတည်း အခက်အခဲတွေသည် ကိုမင်းအောင်လှိုင် အာဏာသိမ်းလို့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေပါ။ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းပါ။ ငါတို့တပ်မတော်သည် ပေါက်လွှတ်ပဲစား၊ လူမိုက် လူရမ်းကား ဓားပြတပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း လက်နက်မကိုင် လက်သီးမဆုပ် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက စည်းကမ်းရှိရှိ ငြင်းခုံ၊ ညှိနှိုင်း အဖြေရှာကတာကမှ တကယ့်သတ္တိပါ။ လူငယ်တွေ အသိနည်းပါတယ်။ လူပြိန်းတွေ ပြောနေကြတဲ့ ငါတို့တပ်ကို အကုန်ဖျက်သိမ်းပြီးမှ ပြန်လည်တည်ဆောက်မယ် ဆိုတာကတော့ စိတ်ကူးယဥ်နေကြတာပဲ ဖြစ်မယ်။ စစ်စည်းကမ်းနဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခက်ခက်ခဲခဲ တည်ထောင်ခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော်ကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့တွေလည်း အာဏာရှင်အမူအကျင့်နဲ့ အဂတိ ခြစားမှုတွေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ကဏ္ဍတွေကိုတော့ ခွဲခြားမြင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီး တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို စည်းကမ်းအတိအကျ ချမှတ်ဖို့ လိုတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ ဆက်စပ်မှုတွေ၊ ခေတ်ဟောင်းရဲ့ အမွေဆိုးတွေကို ဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရာတော့ ပြည်သူအများ ထောက်ခံပါဝင်ဖို့ လိုတယ်။ ဒီအဆင့်ရောက်နေမှတော့ တပ်က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြုပြင်တာတွေ မလုပ်သေးဘဲ ကိုယ့်ကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေ၊ ဖုန်းထဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီအလံ တွေ့ရုံနဲ့ အရေးယူ၊ ရိုက်နှက်၊ မြို့လယ်ကောင်မှာ စစ်မြေပြင်လို မသေမရှင်တွေကို ပိတ်ကန်၊ အရှင်မဖမ်းနဲ့ဆိုပြီး သတ်ပြပြီးတော့မှ ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ပြီး အထူးသက်ညှာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိတွေကို ဘယ်သူ ယုံမှာလဲ။ အာဏာရှင်တွေကို ငါတို့ကိုယ်တိုင် မရင်ဆိုင်နိုင်ရင် ဒီသံသရာထဲမှာပဲ တိုင်းပြည်က လည်နေဦးမှာပဲ။ အခုဟာက အန်အယ်လ်ဒီ၊ အဘွားကြီး ပြဿနာ မဟုတ်တော့ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တယောက် တမျိုးစီ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ တက်အုပ်ချုပ်ချင်နေတဲ့ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တာ ဖြစ်သွားပြီ။ အချင်းချင်းမှာလည်း အရင်လူတွေ လုပ်ခဲ့တာကို မှားလို့ဆိုပြီး ငါတို့ကတော့ မတူဘူးဆိုတာတွေ တော်သင့်ပြီ။ ငါတို့ကိုယ်တိုင် ပြင်စရာတွေအများကြီး ရှိသလို ငါတို့ခေတ်တုန်းကလည်း တပ်မတော်ရဲ့ အမိန့်နာခံတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကြောင့် ခေတ်အလိုက် အာဏာရှင်များကို ပြန်မလှန်ခဲ့ဘဲ အများကြီး မှားခဲ့ကြပြီးပါပြီ။
၈။ တဘက်မှာ အန်အယ်လ်ဒီလူကြီးတွေ မသမာမှုရှိခဲ့ရင် သက်သေအထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးမှာ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစွဲပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက အဘွားကြီးကို အသရေဖျက်ဖို့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကနေ သန်း၄၀၀ လောက် ခိုးထားတာတွေ၊ သားဆီကို လစဥ် ဇော်ဇော်တို့ ဘဏ်ကတဆင့် သန်းချီပို့နေတာတွေ၊ မြေကွက်တွေကို ရိုက်စားထားတာတွေ စတဲ့ သတင်းအမှားအမျိုးစုံနဲ့ ဇာတ်ရှိန်တင်လာခဲ့တာ ရွေးကောက်ပွဲပြီး စစ်တော့လဲ ဘယ်မှာလဲ၊ အထောက်အထားတွေ ပြကြပါ။ ကိုယ်ကမှန်ရင် လုပ်ကြံထွက်ချက်တွေ မဟုတ်ရင် ရဲရဲတင်ပြပါ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ လက်နက်ကို ဘေးချထားဖို့ လိုတယ်။ စွပ်စွဲခံရသူကို သူ့ရှေ့နေတောင် ပေးမတွေ့တာမျိုး၊ လူရယ်စရာ ကိုဗစ် ပုဒ်မတပ်တာမျိုးတွေလို အောက်တန်းကျတဲ့ လှည့်ကွက်တွေ ဆက်သုံးနေရင် ကိုယ့်ဘက်က မပိုင်လို့ဘဲ။ ပါတီရုံးကို (ဘယ်ပါတီမဆို) တပ်၊ ရဲ အင်အားနဲ့ ဥပဒေမဲ့ ဝင်ဖျက်၊ ဝင်လုတာမျိုး ငါတို့ တပ်မတော်သားတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ဝင်မပါ ပါနဲ့။ လိမ်လည် အမှုဆင်တာမျိုးတွေ၊ စစ်ကြောရေးမှာ အရင်ထောက်လှမ်းရေးခေတ်ကလို သေမလောက်နှိပ်စက်ပြီး ထွက်ချက်ယူတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ အမှားရှိသူက အမှားတွေ ထွက်လာမှာပါ။ ကိုယ်က လိမ်ဆင်ရင်တော့ ကိုယ့်အမှားတွေ ဖြစ်သွားပြီ။
၉။ ငါ့ပထမစာကို ဖတ်ပြီး ညီအစ်ကိုအများစုက ကိုမင်းအောင်လှိုင်မိသားစု ရာထူးအာဏာ အရှိန်အဝါကို သုံးပြီး အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကို ကော်မရှင်ကို အတိအကျတိုင်ဖို့ ပြောကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ ဒီကိစ္စတွေကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လက်စုံစမ်းအရေးယူဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်က အထက်ကို တင်ပြနေရသေးတဲ့ ခေတ်ဟောင်းကို ပြန်ရောက်သွားပါပြီ။ နောက်တချက်က ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ဝယ်ချိန်မှာ သူ့သားက ကြားကနေ အမြတ်စားနေတဲ့ ကိစ္စတွေက နိုင်ငံတော်၊ တပ်မတော်ရဲ့ ငွေကြေးကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ အသေးစိတ်တွေကို တင်ပြရရင် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာ ထိခိုက်နိုင်မယ်လို့ ငါ ယူဆတဲ့အတွက် ကော်မရှင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မီဒီယာမှ တဆင့်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်လက်မဆွေးနွေးလိုပါ။ ငါတို့တပ်ထဲမှာ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတယ်လို့ ငါ ယုံကြည်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေမှာလည်း ဒါတွေက တနေ့တမျိုး တခြားအရာရှိကြီးတွေ မိသားစုတွေရဲ့ သတင်းတွေပါ အတိအကျ ထွက်လာနေပါပြီ။ တပ်က တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဦးပိုင်၊ အမ်အီးစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထူးသဖြင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးဟောင်း မြေနေရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဂတိအမှုကိုတော့ ဒီမှာ ပြောလိုက်ပါ့မယ်။
ဒီမြေနေရာကို စင်ကာပူနိုင်ငံက Soilbuild ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ အမ်အီးစီနဲ့ JV လုပ်ပြီး အိမ်ရာစီမံကိန်းကြီးတစ်ခု အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အောင်စိုးသာကို ကြားခံပြီး ကိုမင်းအောင်လှိုင် သမီးက SoilBuild ကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မိသားစုက ရသလောက်ယူပြီးမှ လက်မှတ်ထိုးဖို့ ကြန့်ကြာနေတာနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီကိစ္စ ပေါ်လာတာပါ။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချို့က တကယ်မှန်ရဲ့လား၊ အရပ်ဘက်က မဟုတ်တမ်းတရား စွပ်စွဲတာတွေ ဖြစ်နေဦးမယ်လို့ ငါ့ကို ပြောကြပါတယ်။ အရပ်ဘက်က ကြားရတာလောက်နဲ့ ငါ မပြောပါဘူး။ ဒါတွေက တပ်ထဲက လူငယ်တွေ သမိုင်းသစ်ကို တည်ဆောက်ဖို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ချပြနေလို့ပါ။ ဒီလို မသမာမှုတွေဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေတာတွေပဲ။ တာဝန်သိတဲ့ အဖွဲ့များ ဆက်ပြီး စစ်ဆေးကြပါတော့။ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးမှတဆင့် စင်ကာပူနိုင်ငံကလည်း ဒီကုမ္ပဏီကို ဆက်လက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတော့မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုမသမာမှုတွေကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေကို လုံးဝ သည်းမခံပါ။ ဒီလိုပဲ၊ ကိုမင်းအောင်လှိုင်မိသားစုက ရာထူးအရှိန်အဝါကို အသုံးချပြီး တခြားသော အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ၊ မတရားစီးပွားရှာမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဆက်ပေါ်လာမှာပါ။ အာဏာရှင်တွေ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့ အဂတိဆိုတာ လက်ထဲကို ငွေထည့်တာမျိုးလောက် မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုက မရသင့်မရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အပြိုင်အဆိုင်မရှိ တရားဝင်လုပ်သလို လှည့်ပြီး အမြတ်ထုတ်ကြပါတယ်။ တပ်ခေါင်းဆောင်တွေ ယခင်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြင်ဦးလွင်မှာ၊ နေပြည်တော်မှာ၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အထင်ကရ လူကုံထံ ရပ်ကွက်တွေမှာ၊ သစ်တောမြေတွေမှာ မြေနေရာချပေး၊ ကြားက လုပ်ငန်းရှင်က မတန်တဆ လျှော့ဈေးနဲ့ အိမ်ရာအဆောက်အဦတွေ ဆောက်လုပ်ပေးပြီး ဝေစုခွဲယူ၊ အများက မကပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်တွေကို မိသားစုတွေကို ချပေး၊ ဒါတောင်မှ လူကြီးအများစုက ကိုယ့်ငွေ တစ်သိန်းလောက်တောင် မစိုက်ဘဲ လက်လှည့်ရောင်းရုံနဲ့ မိသားစုတွေ ကြီးပွားချမ်းသာလာတာတွေ အားလုံးဟာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့တွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း လုပ်ခဲ့ကြရင် တရားစွဲကြပါ။ ဥပဒေဆိုတာ အားလုံးကို သာတူညီမျှ ရှိရပါမယ်။ ငါတို့အားလုံး သတိချပ်သင့်တာက ကျော်စောသတင်းနဲ့ သိသိသာသာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလောက်အောင် ချမ်းသာနေတဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ချမ်းသာလာကြသလဲ ဆိုတာပဲ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စစ်လိုက်ရင် အကုန်ပေါ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ သမာသမတ်ရှိကြရင်၊ သတ္တိရှိကြရင် မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ချပြလိုက်ကြပါ။ သားသမီးတွေ မိသားစုတွေ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက စီးပွားရေးလုပ်ကြပါ။ မတားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးရဲ့ အရှိန်အဝါနဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ငွေကြေးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး နိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်လောက်အောင် စီးပွားရှာကြတယ်ဆိုရင် အရေးယူရပါမယ်။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်က လွှဲချတာတွေ၊ အမွေပြတ် စွန့်လွှတ်တာမျိုးနဲ့ လက်ရှောင်တာတွေတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ တပ်မတော်သားပီပီ သတ္တိရှိရှိ မိမိနဲ့ မိမိရဲ့ မိသားစုရဲ့ အပြစ်တွေကို ဝန်ခံပြီး တာဝန်သိသိ နုတ်ထွက်ကြပါ။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောရရင် ဒီစာကို ငါ ရေးတာဟာ ငါတို့ချစ်တဲ့ တပ်မတော်ကို အာဏာရှင် လောင်းရိပ်၊ ပါတီနိုင်ငံရေး လောင်းရိပ်က ကင်းဝေးပြီး ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်ကြီးအဖြစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပါ။ ညီငယ်များ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး ဒေါသခပ်သိမ်း အေးငြိမ်းကြပါစေ။ ဆူးငြောင့်ခလုတ်တွေ ဖယ်ရှားပြီး နိုင်ငံတော်ကို သမာသမတ်ရှိရှိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့် တပ်မတော်ကြီးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ။
၇၃ နှစ်မြောက် တောင်ကိုရီးယားတပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား ကျင်းပ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ၇၃ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှာ လေတပ်၊ ရေတပ် စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနားကို သမ္မတ မွန်ဂျေအင် တက်ရောက်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက သူတို့ အသစ် တီထွင်ထားတဲ့ လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည် ဒုံးခွင်းဒုံးကို စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ ကြေညာ အပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြသာပတေးနေ့ကလည်း တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ကာလတုန်းက သမိုင်းဝင် မာရာဒိုကျွန်းမှာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီ ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ကာကွယ်ရေးအတွက် စစ်လက်နက် စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ပြောနေပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ကို လည်း ရန်လို အပြစ်တင်တဲ့ စကားတွေကို ပြောနေတာပါ။
ဒါပေမယ့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းက တောင်ကိုရီးယားကို တိုက်ခိုက်စရာ အကြောင်းမရှိတဲ့ အကြောင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ အရေးပေါ် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကို ပြန်ဖွင့်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
လူအင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အားရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေ စတင်တော့မယ်လို့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA က စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ၈ လအကြာမှာ ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက စစ်သင်တန်းတွေပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ဟာ ၈ လအကြာမှာ စစ်သင်တန်း အပတ်စဉ် ၉ အထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူအင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အား ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲတော့မယ်လို့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ ဗိုလ်ဂျပန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေး တပ်မတော် (PRA) မှာ အကြမ်းဖက်မင်း‌အောင်လှိုင်သစ္စာခံ အကြမ်းဖက်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့ရာ လုံလောက်တဲ့ အင်အားရရှိလာတာကြောင့် အခုလို စစ်ကြေညာရတာပါ။ အခုလို စစ်ကြောညာပြီးပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့သင်တန်းတွေကို ခဏနားထားမယ်ဗျ။ အခုလည်း စစ်ကောင်စီတွေရဲ့ လုံခြုံရေးတင်ကြပ်ထားတဲ့ကြားက ကျနော်တို့သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၉ အထိ သင်တန်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးသင်တန်းက အမှတ်စဉ် ၂ အထိ သင်တန်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုလို လုံလောက်တဲ့အင်အားရလာပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးဘက်ပြုလုပ်တော့မှာကြောင့် အခုလိုစစ်မျက်နှာဖွင့်ကြောညာရတာပါလို့ ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ပြောက်ကျားတပ်သားတွေ ဖြန့်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီက ပြည်သူတွေကို အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်နေတာကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေ ရသလို ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ်ကြောင့် ရပ်တည်ရခက်ခဲနေတဲ့အတွက် စစ်မျက်နှာတွေကို စောစောဖွင့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာလို့ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ပြောပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တုန်းက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က တုံ့ပြန်စစ်ဆင်နွှဲဖို့ ကြေညာချက်ကိုလည်း ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA က ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
PRA ဟာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာစစ်စည်းကမ်းတွေကို လေးစားလိုက်နာသွားမယ်လို့ PRA တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က တွန်းလှန်စစ်ခေါ်ပြီး အချိန်တစ်ပတ်အကြာ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ စစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်လို့ သေဆုံးတဲ့ ပြည်သူ ၇၈ ယောက်အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အချိန်တစ်ပတ်အတွင်း အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဒေသတည်ရှိရာ မကွေးတိုင်းမှာ ပြည်သူ ၃၁ ယောက်ကျဆုံးခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာတော့ ပြည်သူ ၂၈ ယောက်အထိ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးနှုန်းတွေအရ အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသကို စစ်ကောင်စီက အဓိက ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်နေတာ တွေ့နိုင်ပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်တာ၊ နေအိမ်တွေကို မီးရှို့တာတွေကို ရပ်တန်းကရပ်ပြီး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ People Revolution Army (PRA) တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာဒုံ တပ်မတော်နို့ချက်စက်ရုံအနီး ဗုံးကွဲ
ရန်ကုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပျဥ်းမပင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ တပ်မတော်နို့ချက်စက်ရုံအနီးမှာ စက်တင်ဘာ ၄ ရက် ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီမနက် ၆ နာရီခွဲလောက်က စက်ရုံဘေးအပေါက်အနီး ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့မရှိဘူးလို့ ပျဥ်းမပင်ကျေးရွာနေ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေ ရောက်ရှိလာပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်သွားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်ကလည်း ညဘက် ဗုံးပေါက်ကွဲသံ တစ်ချက်နဲ့ သေနတ်ပစ်ဖောက်သံတွေ ကြားရသေးတယ်လို့ ထောက်ကြံ့လမ်းဆုံအနီး နေထိုင်သူက ပြောပါတယ်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာ အရင်ကလည်း ထောက်ပို့တပ်က ကားတစ်စီး ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ဖူးသလို မြို့နယ်လျှပ်စစ်မီတာရုံးမှာလည်း ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
မနေ့ကလည်း ရန်ကုန်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်က တပ်မတော်ပိုင် ငံပြာရည်စက်ရုံမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့်လာသည့် CDM တပ်မတော်သားများကို သိန်း ၅၀ ဆုငွေပေးမည်ဟု ဂန့်ဂေါ PDF ပြော
လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ CDM လုပ်လာတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူပြီး ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုငွေထောက်ပံ့မယ်လို့ ဂန့်ဂေါ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
အာဏာလု အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ လက်ပါးစေဘဝက ရုန်းကန်လွတ်မြောက်လိုတဲ့ ရဲဘော်တွေဟာ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်ဖို့ လာရောက်ရင် နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုတယ်လို့ ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
လုံခြုံရေးတာဝန်ယူသလို ပြည်ပ ဒါမှမဟုတ် သွားချင်တဲ့နေရာကို သွားနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂန့်ဂေါ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ အပါဝင် ယောနယ်ထဲမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို နေ့စဉ် တိုက်ခိုက်နေပြီး မနေ့ကလည်း စစ်ယာဉ်တန်းကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်လို့ စစ်သား ၁၅ ယောက်လောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်သားနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် လာပူးပေါင်းလျှင် သိန်း ၅၀​ ပေးမည်ဟု PPDF ကြေညာ
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေဘဝကနေ ရုန်းထွက်ပြီး လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ပေးမယ်လို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF က သြဂုတ် ၂၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စက်ဆုပ်ရွံရှာပြီး ပြည်သူနဲ့လာရောက် ပူးပေါင်းချင်သူတွေရှိနေပေမယ့် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီး ထွက်မလာနိုင်တဲ့ သူတွေရှိနေတာကြောင့် အခုလို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရတာလို့ PPDF တပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
လက်နက်အပြည့်အစုံပါမှသာ သိန်း ၅၀ ကျပ် ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပြီး လက်နက်မပါဘဲ လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေကိုလည်း နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပြီး လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကို ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရဲအဖွဲ့အတွင်းရှိ လူကောင်းများနှင့် ပြည်သူ့အရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အားပေး‌ ထောက်ခံလိုသူများ အားလုံးသို့
သတိ! သတိ! သတိ!
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရဲအဖွဲ့အတွင်းရှိ လူကောင်းများနှင့် ပြည်သူ့အရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အားပေး‌ ထောက်ခံလိုသူများ အားလုံးသို့...
အရင်စာမှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူတို့က ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျကျ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို မင်းအောင်လှိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှ တရားမဝင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မညီ၊ ပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး လုယူသွားခဲ့တယ်။ မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ပြည်သူတို့ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် နဲ့တကွ အခြားသော NLD ပါတီဝင် အမတ်များကိုလည်း ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း၊ မတရား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မင်းအောင်လှိုင်ဟာ သန်းရွှေနဲ့ သိန်းစိန် ကြိုးဆွဲရာကနေရတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်ပြီး သင်တို့ကို ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ဖို့ အမိန့်ပေးနေတဲ့၊ ရက်စက်တဲ့ အာဏာရှင်တယောက်သာ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကြမ္မာ သူငင်မဲ့ကိစ္စမှာ သင်တို့က ကြားက ကန့်လန့်အပါမခံချင်ပါနဲ့။
ဩဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၁ ကစပြီး တရားမဝင် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီး နိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ဘယ်သူမှ လက်မခံလည်း သူ့ကိုယ်သူ ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးယူပြီး အိမ်စောင့်အစိုးရဖွဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့တယ်။
မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့တရားမဝင် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့ ဆိုတာ တကယ်တော့ လက်နက်ကိုင် အာဏာရှင်သာ ဖြစ်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ မမှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းပြချက်၊ အတုအယောင် ကတိစကားများ၊ လိမ်ညာ တဘက်ပိတ်သတင်းများနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ရတဲ့နည်းနဲ့ သူ့အာဏာတည်မြဲဖို့နဲ့ သူ့စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ လောဘကြောင့် လှည့်ဖြားနေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်ကြီး ကောင်းစားဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး စိုးစဉ်းမျှတောင် မရှိပါဘူး။ သူ ပြောသမျှ လုပ်သမျှတွေဟာ ရှေ့နောက်မညီတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်လို့ရတဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ထိုင်ခုံပေါ် ဆက်ထိုင်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာ သင်တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် သင်တို့ကသာ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါ။ ဒါကြောင့် သင်တို့တွေလည်း မဟုတ်မမှန်တဲ့ အာဏာကို ဖီဆန်ကြပါ။
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အာဏာလုယူမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ တရားမဝင် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအပြင် တကမ္ဘာလုံး အမြင်မှာ ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးရဲ့ စီးပွားရေးကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမဏ္ဍိုင်ကြီး ပြိုလဲခဲ့ရတယ်။ လူထုကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့် ထူးချွန်သူတွေရဲ့ တွက်ဆချက်အရ နောက် သုံးပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်အပြီးမှာ မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်က ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံခဲ့တယ်။ အခုလို ဆိုးရွားစုတ်ပြတ်တဲ့ ကပ်ဘေးကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့တရားမဝင် အိမ်စောင့်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။
မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့တရားမဝင်စစ်ကောင်စီ တဖြစ်လဲ တရားမဝင်အိမ်စောင့်အစိုးရဟာ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဂုဏ်ကို ဖျက်ဆီးပြီး နိုင်ငံတွင်း လူမုန်းအများဆုံးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့စကားကို မှတ်မိကြလား… ။
“ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို လက်နက်အားကိုးပြီး အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ် ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းသာ ဖြစ်ပြီး တခြားနည်း မဖြစ်စေရ။”
ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ခုခံကာကွယ်ရမဲ့တာဝန်ဟာ တပ်မတော်သား တယောက်စီတိုင်းရဲ့တာဝန် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးက တဦးတည်းပမာ စုစည်းညီညွတ်ကြပြီး အာဏာရှင် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ တရားမဝင် အိမ်စောင့်အစိုးရကို ဖယ်ရှားကြပါစို့။
သန်းရွှေ စခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုတာကြီးက ပြဿနာအားလုံးရဲ့အုတ်မြစ် ဖြစ်ပြီး လူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ တခြားရွေးကောက်ခံ NLD အမတ်တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ကြိုးကိုင်နေခဲ့တယ်။
တပ်မတော် ဆိုတာ လူထု ရွေးကောက်တာ မဟုတ်သလို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ ဝင်‌ရောက်ပါဝင်ခွင့် မရှိဘူး။
တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ၅၄ သန်းသော မြန်မာလူထုကြီးကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားမျှတရေး အားလုံးဟာ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ တရားမဝင် အိမ်စောင့်အစိုးရ ဆိုတာကြီးကြောင့် ပျက်သုဉ်းခဲ့ရတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ လိပ်ပြာလုံဖို့၊ မိမိစိတ်ဓာတ်တွေကို ယခုပင် သန့်စင်ပြီး မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ စိတ်ဓာတ်အရင်းခံ အမြုတေနဲ့ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို နှလုံးသွင်းကာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေကို သေချာချိန်ထိုး စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တဘဝလုံး မကောင်းမှုတွေပြုပြီး သေတဲ့အထိ အကုသိုလ်တွေ တပွေ့တပိုက်ကြီး သင်တို့လည်း ယူသွားချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြည်သူကို ငဲ့ညှာတတ်တဲ့ သင်တို့လို စစ်သားကောင်းတွေကသာ ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြီးကို ရပ်တန့်နိုင်မှာမို့ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်အားကိုးပါတယ်။
မကောင်းမှုမှန်း သိရက်နဲ့ မျက်ကွယ်ပြုနေခြင်းဟာ မကောင်းဆိုးဝါး အကျင့်ပျက် စစ်ကောင်စီကို အားပေးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကောင်းဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုတွေနဲ့ ကလေးတွေ အားလုံး ကောင်းဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး အတူတူ ယခုချက်ချင်းပဲ…
ပြည်သူတွေနဲ့ ရွေးကောက်ခံ အနိုင်ရပါတီ CRPH/NUG နဲ့ ပူးပေါင်းပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းမှုကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချပါ။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ။
ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျ ပြည်သူ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ ရွေးကောက်ခံ NLD အမတ်များနဲ့ တခြားပါတီဝင်များကို အာဏာပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရန် ကူညီပါ။
ကျွန်န်ုပ်တို့ အနာဂတ်တွေဟာ သင်တို့လက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်မှစ၍ သင်တို့ကို အမှန်ကို တွေးနိုင်ဖို့၊ အမှန်ကို မြင်နိုင်ဖို့နဲ့ အမှန်ကို ပြောနိုင်ဖို့ နှောင့်နှေးမနေကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သီချင်းစာသား ‘ဒါ တို့ပြည်၊ ဒါ တို့မြေ၊ တို့ပိုင်တဲ့မြေ၊ တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာ တို့တတွေ ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ၊ တို့ တာဝန်ပေ’ အတိုင်း နှလုံးမူပြီး မြန်မာပြည်သူတွေကို ကယ်တင်ဖို့ ပူးပေါင်းကြပါစို့။
ကျနော် စစ်သားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အာဏာသိမ်းတာမျိုးကို လုံးဝ မထောက်ခံပါဘူး။ လက်ရှိတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်လွှင့်ပေးစေလိုတယ်။ အခု ကျနော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။
သူက အခု ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်အနီးက ခိုလမ်မြို့မှာရှိတဲ့ ခလရ (၆၆) လို့ ခေါ်တဲ့ အမှတ် (၆၆) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှာ တာဝန်ကျနေတယ်။ အာဏာသိမ်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အခု ခလရ(၆၆)ကို အသစ်ပြောင်လာတဲ့ တပ်ရင်းမှူးအသစ်ဟာ အရင်က တပ်မ (၇၇) ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ ခလရ (၆) ရွှေပြည်သာ၊ ရန်ကုန်ကနေ ပြောင်းလာတာလို့ပြောပါတယ်။ အာဏာသိမ်းတော့ တပ်မ (၇၇) က ရန်ကုန်မှာ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့တုန်းက သူ့ကြောင့် ဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုနဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောနေတော့ အင်မတန်မှ ဝမ်းနည်းခဲ့ကြောင်းကို သူငယ်ချင်းက ရင်ဖွင့်လာတယ်။
အဆိုးဆုံးက တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်နေတယ်တဲ့။ တပ်တွေမှာ အခုသုံးခွင့်ရတဲ့ ငွေတွေအနေနဲ့ တစ်လကို ၁၀ သိန်းလောက်သုံးလို့ရကြောင်း၊ အဲ့ငွေတွေကလည်း အမှန်ဆိုရင် စစ်သည်နဲ့ မိသားစုတွေအတွက် သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တပ်ရင်းမှူးက သူ့ အိပ်ကပ်ထဲကိုပဲ ထည့်နေကြောင်း ပြောပြတယ်။
ရဲဘော်တွေဟာ အခုဆိုရင် မခံနိုင်တော့လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ လပိုင်း လဝက်လောက်က တပ်သား မောင်နိုင်ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ဟာ ရှေ့တန်းစခန်းမှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခဲ့တယ်လို့ ပြောပြတယ်။ သူ့အပြစ်ပေါ်မှာစိုးလို့ အထက်လူကြီးတွေကို ငွေနဲ့ ပေးကမ်းပြီး စစ်သည်သေဆုံးမှုဟာ သူ့မိန်းမနဲ့စကားများ ရန်ဖြစ်ရာကနေ စိတ်တိုပြီး သတ်သေခဲ့တယ်လို့ အမှုစစ်ဆေးချက် စုံ/ခုံအမှုတွဲမှာ အဲလို့ ရေးသားခဲ့လို့ သူက ရာထူးမထိခိုက်ခဲ့ပေမယ့် သေဆုံးတဲ့ စစ်သည်မှာ အများကြီးနစ်နာခဲ့ပြီး လျော်ကြေးငွေတောင် မရခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အခု တပ်သား မောင်နိုင်ရဲ့ မိန်းမကိုလည်း ဘာမှ မထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် သူခမျာ ကလေး ၃ ယောက်နဲ့ အရမ်းစိတ်ညစ်ပြီး ရွာပြန်ဖို့အတွက် ပြင်နေဆင်နေပါတယ်။
တပ်မှာလည်း တပ်ရင်းမှူးရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့် စစ်သည်တွေ ရှေ့တန်းကနေ ထွက်ပြေးတာ ၅ ယောက်တောင်ရှိပြီလို့ ပြောပါတယ်။ စစ်ပြေးစစ်သည် ၅ ယောက်ကိုလည်း အထက်လူကြီးတွေဆီ တရားဝင် မတင်ပြဘဲ လစာနဲ့ ရိက္ခာတွေကို ခိုးယူပြီး တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးကနေတစ်ဆင့် သူ့မိန်းမကို လစဥ် သွားအပ်ရတယ်လို့ ပြောပြလာပါတယ်။ လက်ရှိ တပ်က ရဲဘော်တွေက ထွက်ပြေးဖို့လည်း ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် သူတို့တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတာတွေကို ပြည်သူတွေသိအောင် ပြောပြပေးဖို့နဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ မတရား လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း ခလရ (၆၆) က ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ လုံးဝလက်မခံကြောင်းနဲ့ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရကိုသာ လိုလားကြောင်း ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။ အခုအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေသိရှိအောင်နဲ့ ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်မယ့် ရဲ‌ဘော်တွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီဗွီဘီကတဆင့် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းမည့် တပ်မတော်သားများ၏လုံခြုံရေး တာဝန်ယူမည်ဟု မိုးဗြဲ PDF ထုတ်ပြန်
ပြည်သူနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းမယ့် တပ်မတော်သားတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို အပြည့်အဝ တာဝန်ယူမယ့်အပြင် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြည်သူ့စစ်သား People’s Soldier အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ မိုးဗြဲ PDFက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်နက်ခဲယမ်းအပြည့်အစုံနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းပါက ပြည်သူပံ့ပိုးထားတဲ့ ဆုတော်ငွေတွေကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် ချီးမြှင့်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရားစေခိုင်းမှုတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ အောက်ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အခုချိန်ဟာ ပြည်သူ့စစ်သားတွေအတွက် အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတွေဟာ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် စတေးခံမဖြစ်စေဖို့ ပြည်သူ့ဘက်ကို ရပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်း တိုက်တွန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ပတ်သည်အထိ အူ တွန်းလှန်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားသလို ပြည်သူဘက်ကို ရပ်တည်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ခက်ခဲမှုမျိုးစုံ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာ မှန်ပေမယ့် ပြည်သူစစ်သားတွေကို မိုးဗြဲ PDF က နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံလာမည့် တပ်မတော်သား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ ၅ ချက် NUG ထုတ်ပြန်
ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံလာတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စပ်လျဉ်းတဲ့ မူဝါဒ ၅ ချက်ကို အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဩဂုတ် ၂၃ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ “အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ” ဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တရားဝင်ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုကာ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူထားရုံသာမက ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့ “အကြမ်း ဖက်စစ်အုပ်စု” ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူ လူထုတရပ်လုံးနဲ့ သက်သေအထောက်အထားဖြစ်စဉ်တွေက ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကနဦး ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ အမိန့်အာဏာကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ သူ့ရဲ့ လက်အောက်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေကြတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် ဆက် လက်ရပ်တည်မယ့်အစား အမှန်တရားနဲ့ ပြည်သူ့ရင်ခွင်ဆီ ခိုလှုံရပ်တည်ကာ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ခံယူရေးအတွက် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ လိုအပ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ လက်ကိုင်တုတ်တွေအဖြစ် ရပ် တည်နေတာဟာ အချုပ်အခြာအာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုတာ၊ ပြည်သူကို ပုန်ကန်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုကို မလွဲမသွေ ခံယူကြရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း လေးလေးနက်နက် သတိပြုအပ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာ တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုလှုံကာ ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမယ့် တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်မှု၊ ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိမှုတွေကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုပြီး လိုအပ်တဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ မူဝါဒတွေကို ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ မူဝါဒတွေထဲမှာ တရားမဝင်အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ လမ်းခွဲပြီး ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံဖို့ ဝန်ခံကတိပြုတဲ့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြည်သူ့သားကောင်းတွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ လုပ်သက်၊ ရာထူးနဲ့ ပင် စင်တွေကိုပါ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဆက်လက်တာဝန်ယူမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လတ်တလောလိုအပ်တဲ့ အသက်လုံခြုံမှု၊ မိသားစုဘဝလုံခြုံမှုနဲ့ ဘဝရပ် တည်မှုတို့ကို အာမခံနိုင်တဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မယ့် အစီအမံတွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွား မှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံမယ့် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်တာ၊ ဒဏ်ခတ်အရေးယူတာမျိုးတွေ မပြုလုပ်နိုင်အောင် "ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်" အပါအဝင် မဟာမိတ်တွေ၊ ပြည်သူတွေကိုလည်း အသိပေးညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ၊ တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အသစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမယ့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့လည်း အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ထားရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမူဝါဒတွေနဲ့အညီ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်သူ့တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကြိုဆိုလက်ခံရေးနဲ့ တပ်တွေ ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ အထူးကော်မတီတ ရပ်ကိုလည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအတု ထွက်ပေါ်
မကွေးတိုင်းအတွင်းက ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအတု ပြီးခဲ့ရက်အနည်းငယ်က ထွက်ပေါ်လာပြီး မဆက်သွယ်ကြဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။
ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်ထန်ထွဋ်က “ဗိဿနိုးပြည်သူ့ကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြည်သူလူထုဆီ သတင်းပြန်ကြားပေးဖို့ သီးသန့်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဗိဿနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်မှာအတုပေါ်ထွက်နေတဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ မဆက်သွယ်မိကြဖို့နဲ့ ဆက်သွယ်လာရင်လည်း ပြန်လည်မဆက်သွယ်ကြဖို့ သတိပြုစေလိုပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီကိုမှ အလှူခံယူခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ နောက်နောင်လည်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်မှာကနေ အလှူခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ သတင်းပြန်ကြားရေး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်မှာကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Like နဲ့ Follows ပြုလုပ်ထားသူ ၆၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြည်သူတွေနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အထူးအာမခံပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေက ပံ့ပိုးထားတဲ့ ဆုတော်ငွေတွေ ချီးမြှင့်မယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) က ကြေညာပါတယ်။
KNDF ဟာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ မကြာခဏ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီး စစ်ကောင်စီ အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ သေဆုံးတာ စတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပေးဆပ် ဆုံးရှုံးတာတွေ တွေ့နေရတယ်လို့ မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
မြန်မာပြည်တွင်း စစ်သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ စစ်အုပ်စုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေရဲ့ သွေး၊ ချွေးတွေကို ဖြုန်းတီးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အောက်ခြေ တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ ပြည်သူကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်မှာ ဆက်လက် တာဝန်မထမ်းဆောင်တော့ဘဲ ပြည်သူနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ပြတ်တဲ့အထိ အတူတွန်းလှန်ကြဖို့ KNDF က ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
ဒီလို ပူးပေါင်းလာတဲ့ စစ်သားတွေကို လက်ခံပေးဖို့ CDM စစ်သားတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ ပြည်သူ့စစ်သားများအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ CDM စစ်သားတွေကို ဌာနတခုဖွင့်လှစ် စိစစ်ပေးဖို့လည်း ပြည်သူ့စစ်သားများအဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဩဂုတ် ၁၇ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ၇၃ နှစ်မြောက် ကရင်နီတပ်မတော်နေ့ အခမ်းနားကို ကရင်နီပြည် တပ်မတော် အမှတ် (၁) တပ်ရင်း နယ်မြေတနေရာမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ရွှေဘိုမြို့၌ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသည့် အငြိမ်းစား တပ်မတော်ဆရာဝန် ၁ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုမြို့မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလို့ ဆိုပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦး သြဂုတ် ၁၃ ရက် ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဒေါက်တာ ထက်ကိုကိုဟာ အငြိမ်းစား တပ်မတော်ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရွှေဘိုမြို့ အမှတ် ၃ ရပ်ကွက်မှာ မေခ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ကာ ပြည်သူတွေကို ဆေးကုသ ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေသခံ တစ်ဦးက “ဒီမနက် ၈နာရီလောက် မေခဆေးခန်းမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုး ပေးလို့ ဆိုပြီး ရဲတွေကလာဖမ်းသွားတယ်။ သူက ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာ ထက်ကိုကိုဟာ မိသားစုပိုင်တဲ့ မေခဆေးခန်းအပြင် မြတ်စေတနာ နာမည်နဲ့ အခမဲ့ ဆေးခန်းဖွင့်ပြီး ပြည်သူတွေကို အခမဲ့ကုသပေးနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီ ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းနီတပ်မတော်က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ဟဲဖက်ကျေးရွာမှာ ဩဂုတ် ၈ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ စစ်ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းနီတပ်မတော် (SNA) က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
SNA ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းဆေထွန်းက “နေ့လယ် ၁ နာရီခွဲကပါ။ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ ယာဉ်တစ်စီးကို မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်က ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဘက်က ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာ နန့်တောအနီးမှာ အခြေချနေတာဖြစ်ပြီး ဩဂုတ် ၈ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း စစ်ကားသုံးစီးနဲ့ ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဩဂုတ် ၆ ရက်နေ့ကလည်း ဟဲဖက်အုပ်စု ကွေ့ပေကျေးရွာအနီးမှာ SNA ရှမ်းနီတပ်နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တို့ ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်ယာဉ်တန်း မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ သတင်းထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးပါဘူး။
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် SNA ရှမ်းနီတပ်မတော် တိုက်ပွဲဖြစ်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် ဟဲဖက်ကျေးရွာမှာ သြဂုတ် ၅ ရက်က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ရှမ်းနီတပ်မတော် (SNA) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သြဂုတ် ၅ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ၃ နာရီကြာဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာ စစ်ကောင်စီဘက်က ၄ ဦး ထိခိုက်ကျဆုံးတာရှိခဲ့ပြီး သူတို့ဘက်ကတော့ ထိခိုက်ကျဆုံးတာ မရှိဘူးလို့ SNA အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်မှာ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA တို့ တိုက်ပွဲ ၄ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပုလဲမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်နှင့် စစ်ကောင်စီတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုလဲမြို့နယ် ကန်ဒေါင့်ကျေးရွာအနီးရှိ နဂါးမတောင်မှာ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်နဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တို့ မနေ့ည ၇ နာရီလောက်က တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပုလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက "ကျနော်တို့ PRA တပ်တွေ ရှိတဲ့နေရာကို စစ်ကောင်စီတပ်တွေက လာတိုက်တာ။ သူတို့လာတာကို ကျနော်တို့က ကြိုပြီးသတင်းရထားတော့ ကြိုတင်ပြင်စဉ်ချိန်ရတယ်ဗျ။ သူတို့အင်အား ၇၃ ယောက်ရှိတယ်။ RPG သမား ၂ ယောက်၊ စနိုက်ပါသမား ၄ ယောက်ပါတယ်ဆိုတာ ကြိုသိထားတော့ ကျနော်တို့က နဂါးမတောင်ကနေ စောင့်တိုက်တာ။ သူတို့ဘက်က RPG နဲ့ထုတာ ၁၈ ချက်လောက်ရှိတယ်။ မိုးရွာလာလို့ ကျနော်တို့ဘက်က နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ပုလဲမြို့နယ်အတွင်း လက်ရှိတိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်ဘက်က တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး စစ်ကောင်စီဘက်ကအကျဆုံးကို မသိရသေးပါဘူး။
အခုတိုက်ပွဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မဟာမိတ်လုပ်ထားတဲ့ ပုလဲ PDF တပ်ဖွဲ့နဲ့ မြိုင် PDF တို့ ပူးပေါင်း ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် (PAR) က စစ်ကောင်စီကို တော်လှန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပ်မတော်(DRPA)နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
ကရင်ပြည်နယ် တောတွင်းတနေရာမှာရှိနေတဲ့ အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူ့ တပ်မတော် (DRPA)ရဲ့ ယာယီစစ်စခန်း တစ်ခုနားကို ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ရင်း တစ်ခု တောနင်းလာစဉ် ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး တိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲမှာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၁၀ ဦး သေဆုံးကာ ဒဏ်ရာရသူ အများအပြား ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး DRPA ဘက်က ရဲဘော် ၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့ မပြင်းထန်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဘက်က M-16 အကြီး ၇လက်၊ ပစ္စတို ၂ လက် ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း DRPA ဘက်က ဆိုထားပါတယ်။
"စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်က လူထုဟာ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းရှိနေချိန် ဖြစ်လို့ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ လူငယ်တွေအသီးသီးဖွဲ့ထားတဲ့ pdf တွေ အဖွဲ့ငယ်တွေ ဟာ တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲရာမှာ တူမီး၊ လက်ပစ်ဗုံးလောက်နဲ့ တိုက်နေကြရတာပါ။ ဖြစ်စေချင်တာက NUG ကနေ အဲဒီအဖွဲ့ငယ်တွေကို support ပေးစေချင်တယ်။ အခုအချိန်မှာ အဖွဲ့တိုင်းဟာ စားနပ်ရိက္ခာ ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်အပြင် လက်နက်ဝယ်ဖို့ ငွေကြေး အခက်အခဲ ရှိနေ ကြတယ်”DRPA ရဲ့ ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် က ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်က “NUG က ပြည်သူတွေဆီက ရထားတဲ့ အလှူငွေတွေကို တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကို ပြန်ထောက်ပံ့ပေးစေချင်တယ်။ မဟုတ်ရင် အဖွဲ့ငယ်တွေ မကြာခင်မှာ ပြိုလဲသွားကြလိမ့်မယ်။ NUG အောက်က pdf ဖြစ်စေ သီးခြားအဖွဲ့ဖြစ်စေ အားလုံးစည်းလုံးမယ်ဆို အောင်မြင် မှာပါ'' လို့ ဆိုပါတယ်။
DRPA အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ တိုက်ပွဲကြီး ၂ ပွဲ၊ တိုက်ပွဲငယ် ၃ ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး မြို့ပေါ်ဖောက်ခွဲမှု အနီးကပ်ပစ်ခတ်မှု အများအပြားကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒလန်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အထိ သုတ်သင်ထား ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တောင်တွင်းကြီးတွင် ဗိဿနိုးနယ်မြေ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖွဲ့စည်း
မကွေးတိုင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမှာ ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ''ကျနော်တို့ PDF (ဗိဿနိုး) တပ်ဖွဲ့ဟာ ပြည်သူလူထုကို စစ်ရေးအရကူညီဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး မဟာမိတ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမှ PDF အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ'' လို့ ပြောပါတယ်။
PDF (ဗိဿနိုး) တပ်ဖွဲ့ဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
မတရားသည့်အမိန့်များ မနာခံလိုပါက စစ်တပ်ထဲမှ ထွက်ကြရန် CDM တပ်မတော်အရာရှိများ တိုက်တွန်း
စစ်တပ်က နိုင်ငံတော်အာဏာ တရားမဝင်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ပေးလိုက်တဲ့အမိန့်တွေက မတရားတဲ့အမိန့်တွေဖြစ်လို့ တပ်မတော်အရာရှိစစ်သည်တွေအနေနဲ့ အဲဒီမတရားတဲ့အမိန့်တွေကို မနာခံချင်ရင် စစ်တပ်ထဲကနေထွက်ခဲ့ကြဖို့ အာဏာဖီဆန် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့ တပ်မတော်အရာရှိတွေက တိုက်တွန်းပြောပါတယ်။
လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အရပ်သားအစိုးရဆီကနေ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုကို အကြောင်းပြပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက နိုင်ငံတော်အာဏာကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်သူတွေကို ဖြိုခွင်းဖို့ပေးလိုက်တဲ့ အမိန့်တွေအားလုံးဟာ မတရားတဲ့အမိန့်တွေဖြစ်နေတာကြောင့် အဲဒီအမိန့်တွေကို မလိုက်နာချင်ရင် စစ်တပ်ထဲကနေ ထွက်ခဲ့ကြဖို့ CDM တပ်မတော်အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးထွန်းမြတ်အောင်က တိုက်တွန်းပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို လက်သင့်မခံဘဲ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကို ရဲနဲ့ စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ ပြည်သူ ၉၀၀ နီးပါးသေဆုံးပြီး ၅၀၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ လူငယ်အများစုက စစ်အာဏာရှင်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ထုတ်ဖို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထံသွားရောက်ခဲ့ပြီး အခြေခံစစ်ပညာသင်ယူကာ ရရာလက်နက်နဲ့ စစ်ကောင်စီကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။
ဒါတွေကို ဖြိုခွဲဖို့အမိန့်ပေးခံရပြီဆိုရင် လုပ်ဆောင်မယ့် တပ်မတော်သားတွေက အဲဒီအမိန့်တစ်ခုပေါ်သေချာစဉ်စားသင့်တယ်လို့ Captain Zero က ထောက်ပြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပျံ့နှံ့မှုတွေများနေတဲ့အချိန် ပြည်သူတွေအတွက် မကြည့်နိုင်ဘဲ အာဏာတည်မြဲရေးကို ဆက်လက်ဖက်တွယ်ထားတဲ့ တပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အဖျက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်း CDM လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ တပ်မတော်အရာရှိတွေက ဝေဖန်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေတွေမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို ကြည့်ပြီး တပ်မတော်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်ပြီး ရပ်တည်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်နဲ့အမြန်ပူးပေါင်းကြဖို့လိုတယ်လို့ ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦးက တိုက်တွန်းပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တပ်မတော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့လုပ်ရပ်ကို မကြိုက်တဲ့အတွက် အာဏာဖီဆန်မှုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့တပ်မတော်အရာရှိစစ်သည် ၁၀၀၀ နီးပါးရှိ‌နေပါတယ်။
တပ်ထဲကနေထွက်လာမယ့် တပ်မတော်သားတွေကိုလည်း ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကြိုဆို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့ အာဏာဖီဆန်မှုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတဲ့ တပ်မတော်သားတွေက တိုက်တွန်းပါတယ်။